Maxamed Maahir mise Zakariye Ismaaciil?! | KEYDMEDIA ENGLISH
Maxamed Maahir mise Zakariye Ismaaciil?!
Zakariye, wuxaa hore loogu eedeeyay maleegidda weerarro lagu qaaday Huteellada Caasimadda, waxaana ka mid ah qarixyadii lagu dilay AUN Injineer Yariisow iyo Jen. Galaal.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xilli ay si weyn shacabka iyo siyaasiyiintu, uga falceliyeen digniinta amni ee saaka xilli hore lagu daabacay bogga Twitter-ka NISA, loona qaatay in lagu xaaleysanayo dhiigga RW Rooble, ayaa haddana la is weydiinayaa shaqsiga uu yahay Maxamed Maahir oo hay’addu sheegtay inuu qorsheynayo beegsiga xaafiisyo sar-sare.
Sida ay Keydmedia Online, ka ogaatay Xogo Sirdoon, waxaa “Qaybta Difaaca Shacabka” ee hay’adda NISA, ka howl-gala, nin lagu magacaabo [Xayir Maxamed Maahir], kaasoo hore uga tirsanaa Kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan qeybta Sakawaadka, hayeeshee, Fahad Yaasiin labo sano ka hor ka dhigay sarkaal awood xooggan ku dhex leh hay’adda Nabad-sugidda.
Xoguhu, waxa ay tilmaamayaan in Maahir, aad ugu dhowyahay nin la yiraahdo Zakariye Ismaaciil, isla-markaana uu galangal ku leeyahay xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, oo ay ka howl-galaan saraakiil ay saaxiibo yihiin. Hoggaanka NISA, waxa ay doonayaan in Mowjadda Maahir la saaro, xitaa haddii uusan qeyb ka ahayn qorshaha ay damacsan yihiin.
Sida ay ku doodayaan dadka u dhuun duleela siyaasadda, Fahad iyo Farmaajo, waxa ay doonayaan, in ay fududeeyaan sidii dabley ka tirsan Al-Shabaab, loo galin lahaa gudaha Madaxtooyada, si ay u beegsadaan hoyga ama xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, oo dhawaan si cad u sheegay in khatarta amni ee dalka mareyso halkii ugu sarreysay.
Sida cad, Al-Shabaab, ma awoodaan in ay galaan gudaha xarumaha Dowladda ee aadka loo ilaaliyo, haddii aysan helin garab gudbiya, waxaana howlahaas ka caawiya Zakariye Ismaaciil Axmed Hersi, oo xilli hor-jooge u ahaa Amniyaadka, Kooxda Xiriirka la leh Al-qaacida, wuxuuna hadda aad ugu dhow yahay eedeysane Fahad Yaasiin.
Dadka ka falceliyay hadalka NISA, waxa ay si aan gambasho lahayn u sheegeen in shaqsiga magaciisa lagu sheegay Maxamed Maahir, uu yahay Zakariye Ismaaciil oo magaca baddeshay, duullaanna ku ah RW Rooble, kuna howllan sidii uu dabley hubeysan oo aqoonsiga NISA loo qeybiyay, ugu diyaarin lahaa gudaha Villa Somalia.
Zakariye, oo ku heyb ah Farmaajo, wuxuu Nabad-sugidda u qaabilsan yahay Hawl-gallada Qarsoon oo u jeedkoodu yahay dhibaatenyta dadka ka aragtida duwan Rajiimka wqtigu ka dhamaaday, sidoo kale waa mid ka mid ah irdaha NISA, ka gasho Al-Shabaab, wuxuuna xoogga saaraa daba-galka siyaasiyiinta mucaaradka ah.
Zakariye, wuxuu ku jiray, todobadii hoggaamiye ee ugu sarreeyay Al-Shabaab ee uu bartilmaameed-saday maamulkii Barack Obama, sanadkii 2012-kii, waxaana madaxiiisa la dul dhigay 3 melyan oo doolar, hayeeshee, hadda isaga oo gashan shaar dowladeed ayuu aargoosi qabiil iyo anaaniyad argagaxiso u beegsanayaa Madaxda Muqdisho.
Zakariye, wuxaa hore loogu eedeeyay maleegidda weerarro lagu qaaday Huteellada Caasimadda, waxaana ka mid ah qarixii July 24, 2019, ka dhacay Xarunta Gobolka Banaadir, kaas oo uu ku geeriyooday AUN, Guddoomiye Cabdiraxmaan Cumar Cismaan [Yariisow] iyo weerarkii, Jan 31, 2021 ka dhacay Huteel Afriik, ee lagu dilay Jen. Maxamed Nuur Galaal.
Fahad Yaasiin, Wuxuu dhidibada u taagay koox isku xiran oo ah Argagaxiso xasaanad leh oo Muqdisho ka howl-gasha, wuxuu magaalada Muqdisho soo galiyay Al-Shabaab-kii ugu badnaa, sida uu caddeeyay Taliye ku xigeynkii hore ee NISA Cabdalla Cabdalla, kaas oo shaqada laga raacdeeyay markii uu sheegay inuu soo bandhigayo xogo uu hayo.
Waa hubal in shaqsiga ugu awoodda badan Kooxda Farmaajo, uu xiriir qoddo dheer la leeyaahy Al-Shabaab iyo Ururo ka waaweyn oo Argagixiso iyo sir-doon waddamo shisheeye ah, Fahad Yaasiin, waxaa ku maqan dhamaan dadkii siyaasadda loo dilay shanti sano ee la soo dhaafay oo AUN Xildhibaan Aamno Maxamed Cabdi ugu danbeysay.
RW Rooble, wuxuu ilaa hadda si geesinnimo leh u wajahayaa dhameystirka hannaanka doorashada, wuxuu xalay raacdeeyay adeegayaal Fahad Yaasiin u joogay Guddiga FEIT, kuwaas oo isku dayay in ay carqaladeeyaan shaqada shahaado siinta xildhibaannada, waxaana ka go’an in ka hor dhamaadka bishaan la dhaariyo baarlamaanka 11-aad.